VirtualBox 6.1.18: nyowani vhezheni ine rutsigiro rweLinux 5.10 LTS | Linux Vakapindwa muropa
Oracle yakaburitsa iyo nyowani vhezheni yayo yakavhurwa sosi, muchinjika-chikuva virtualization software. Zvayo ndezve VirtualBox 6.1.18, kuburitswa kwekuchengetedza pamwe nezvimwe zvinonakidza zvinogadziridzwa uye kugadzirisa. Uye inouya mushure memwedzi mitatu mushure mekuburitswa kwa6.1.16, mwedzi mitatu umo vanogadzira vayo vakashanda nesimba kupora software uye nekupa iyi diki yekusvetuka kumberi.
Iyi vhezheni itsva yeVirtualBox inova yekutanga kuve nerutsigiro ruzere rwechizvino kernel nhevedzano, Linux Linux LTS. Saka, kana iwe uchifarira iyi vhezheni, iwe unotoziva kuti iyi nyowani VirtualBox ndizvo zvawanga uchitsvaga. Asi rutsigiro irworwo handiro chete chinhu chauya chitsva kuVirtualBox 6.1.18, kune zvimwe zvekuvandudza ...
Inowedzerawo kugadziridza kwekuenderana ine CentOS 8.2-2004 uye gare gare vhezheni yeiyi distro, pamwe nekutsigira kusimudzira kwemastros anoshandisa Linux kernels 3.2.0 kusvika 3.2.50. Saizvozvo, iyo chaiyo muchina segfault kukanganisa kwakaitika panguva yekuteedzera / kunama mashandiro paunenge uchishandisa yakagovaniswa clipboard pane X11 graphical server yakagadziriswa.
VirtualBox 6.1.18 ine basa rayo Yakagoverwa folda kushanda zvirinani kupfuura mushanduro dzakapfuura, sezvo bhagi rakaitika kune vashandisi veLinux kana ichiedza kukwira dhairekitori pane muenzi weLinux yakagadziriswa.
Ehe saizvozvo, vanewo kugadzirisa matambudziko nekutamba kwekuteerera, matambudziko kana iyo inomiririra system ichienda kunorara, kuvandudzwa kweneti parameter, nezvimwe. Nekudaro, kana iwe wanga uchishandisa yapfuura vhezheni yeVirtualBox uye iwo ma glitches akaitika, haufanire kunetseka nezvawo.
Kana iwe uchifarira, iwe unotoziva kuti chii dzakasununguka zvachose, uye iwe unogona kuitora kubva pawebhusaiti yepamutemo yandinokuratidza pazasi. Ikoko inowanikwa kune akasiyana mapuratifomu uye iwe unogona zvakare kurodha iyo yekuwedzera, nezvimwe.
Mamwe mashoko - VirtualBox yepamutemo webhusaiti (kurodha pasi)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » VirtualBox 6.1.18: nyowani vhezheni ine rutsigiro rweLinux 5.10 LTS
Zvichava kuti kwete, yapfuura 6.1.16 yatove nerutsigiro rwemberi 5.10, iyi vhezheni itsva haisi yekutanga kuitsigira, sezvo ini ndine 6.1.16 ine kernel 5.10 inoshanda zvakakwana kwenguva yakareba. Saka zvisiri izvo nhau.